မြိုးဆကျသဈ ဘောလုံးသမ လေးတှကေို စိတျဓါတျခှနျအားတှေ ပေးစှမျးခဲ့တဲ့ ရိုနယျဒို - SPORTS MYANMAR
မြိုးဆကျသဈ ဘောလုံးသမ လေးတှကေို စိတျဓါတျခှနျအားတှေ ပေးစှမျးခဲ့တဲ့ ရိုနယျဒို
ပျေါတူဂီ တိုကျစဈမှုးကွီး ခရစ်စတီယာနို ရိုနယျဒို ဟာ ပျေါတူဂီ ဘောလုံး သမိုငျး တဈလြောကျ အထှနျးလငျး အတောကျပ ဆုံး ကစား သမား အဖွဈ ရှိနခေဲ့ ပါတယျ ။ ပျေါတူဂီ ရဲ့ သကျတမျး အလိုကျ ဘောလုံး အသငျး အားလုံး မှာ ရိုနယျဒို ရဲ့ လှမျးမိုးမှု က ကွီးမား ခဲ့ပွီး ရိုနယျဒို ရဲ့ ကွိုးစားမှု ၊ ပွငျးပွ တဲ့ ခံယူခကျြ ၊ နိုငျလိုစိတျ တှေ ဟာ အမြိုးသား ရော အမြိုး သမီး အသငျး တှကေပါ စံပွ တဈဦး အဖွဈ မှတျယူ ထားခဲ့ ကွပါတယျ ။
ဒီ အထဲမှာတော့ ပျေါတူဂီ U-17 အမြိုးသမီး အသငျး ဟာ သူတို့ရဲ့ စံပွ ကစား သမားကွီး ဆီက လကျဆောငျ တှေ နဲ့ ပေးစာ ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။ ယူရို ၂၀၂၀ အမြိုး သမီး ပွိုငျပှဲ ကို ၀ငျရောကျ နိုငျဖို့ ကွိုးစား နတေဲ့ ပျေါတူဂီ U-17 သငျး ရဲ့ ရှလေ့ာမယျ့ ခွစေဈပှဲ တှေ မတိုငျခငျ မှာ ရိုနယျဒို ဟာ လကျဆောငျ တှေ နဲ့ အတူ စိတျဓါတျ ခှနျအားတှေ ရရှိ စမေယျ့ စာ တဈစောငျ ကို ရေးသား ပေးပို့ ခဲ့တာ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
U-17 အမြိုးသမီး အသငျး ဟာ အကျဈတိုးနီးယား နိုငျငံ က အိမျရှငျ အဖွဈ လကျခံ ကငျြးပမယျ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲ အတှကျ အရေး ပါတဲ့ နောကျဆုံး အဆငျ့ ခွစေဈ ပှဲ ၃ ပှဲ ကို နိုဝငျဘာထဲ မှာ ယှဉျပွိုငျ ကစား ရတော့ မှာ ဖွဈပွီး အခုလို သူတို့ရဲ့ စံပွ ကစား သမားကွီး ဆီက မထငျမှတျ ထားတဲ့ လကျဆောငျ တှေ ၊ ပေးစာ တှေ ဟာ စိတျဓါတျ ခှနျအား တှေ နဲ့ ပြျောရှငျမှု တှကေို ယူဆောငျ ပေးနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အမြိုးသမီး အသငျးသူ တှေ ဟာ ရိုနယျဒို ပေးထားတဲ့ ဘောကနျဖိနပျတှေ နဲ့ အတူ ပေးစာ ကို ဓါတျပုံ ရိုကျပွီး သူတို့ အသငျးရဲ့ Instagram အကောငျ့မှာ ဖျောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ အဆိုပါ စာထဲ မှာ ရိုနယျဒို က အောငျမွငျမှု ကို လှမျးယူ နိုငျဖို့ ဘယျလို စိတျဓါတျ နဲ့ ခံယူခကျြ တှေ ကို မှေးမွူ ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျး ကို အဓိက ထား ရေးသား သှားခဲ့ တာ ဖွဈ ပါတယျ ။
“ဒီ Nike ဘောကနျ ဖိနပျ တှေ ဟာ မငျးတို့လေးတှေ ရဲ့ အိပျမကျတှေ ကို လှမျးယူ ရာမှာ အကူ အညီ ဖွဈစေ မယျလို့ မြှျောလငျ့ ပွီး ပေးပို့ လိုကျရ တာဖွဈ ပါတယျ ။ ငါ့ရဲ့ လူငယျ ဘဝ တုနျးက အိပျမကျ က တကယျရိုးရှငျး ပါတယျ ၊ ဒါပမေယျ့ ပွငျးပွ ထကျသနျ တဲ့ အိပျမကျ တဈခု ပါ”
“အိပျယာ ထဲမှာ အိပျပြျော နတေုနျး တှရေ့တဲ့ အိပျမကျ မြိုး မဟုတျခဲ့ ပါဘူး ။ အရမျး ကို လိုခငျြ တောငျ့တ ပွီး အိပျယာ ထဲ မှာ တောငျ နိုးထ နလေောကျတဲ့ အထိ ပွငျးထနျ တဲ့ စိတျဆန်ဒမြိုး ပါ ။ အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး ဘောလုံး သမား တဈယောကျ ဖွဈလာ ဖို့ ပါပဲ”
“ဒီ အိပျမကျ ဟာ ငါ့ကို အားကစား ခနျးထဲမှာ ၊ လကေ့ငျြ့ရေး ကှငျးထဲမှာ ၊ ဘောလုံး မွကျခငျးပွငျ တှေ ပျေါရောကျတဲ့ အထိ စှဲမွဲ စခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒီ အိပျမကျ နဲ့ ရှငျသနျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဘာလုပျလုပျ ဒီ အိပျမကျ ကို လှမျးကိုငျ နိုငျမယျ့ အရာတှေ ခညျြး ဖွဈခဲ့ ပါတယျ”
“ငါ့ရဲ့ အိပျမကျ ကို ငါကိုယျတိုငျ သတိပွု ရှေးခယျြ နိုငျခဲ့ သလိုပဲ မငျးတို့လေးတှေ ကလညျး ကိုယျ့ရဲ့ အိပျမကျ ပနျးတိုငျ ကို ကိုယျတိုငျ သတိပွု မိကွဖို့ မြှျောလငျ့ ပါတယျ ။ ဒီ အိပျမကျ ဟာ မငျးတို့ ရှေ့ မှာ ရှိနေ တာပါ ။ တှနျ့ဆုတျ မနဘေဲ ရယူနိုငျဖို့ အတှကျ အားထုတျကွပါစို့ ။ ငါတောငျ လုပျနိုငျခဲ့တာပဲ . . . မငျးတို့လေးတှေ လညျး လုပျနိုငျ ရမှာပါ”
“နောကျဆုံး အဆငျ့ ခွစေဈပှဲ ကို ရောကျရှိ သှားတဲ့ အတှကျ အရမျးပဲ ဂုဏျယူမိ ပါတယျ ။ ဆကျပွီး ကွိုးစားပါ ။ နောကျထပျ အောငျပှဲ ဆီကို စိတျအာရုံ အပွညျ့ စူးစိုကျ ထားပါ ။ ကံကောငျး ပါစေ ။ ဖိနပျတှေ အားလုံး အဆငျပွေ ကွပါစေ” – ခရစ်စတီယာနို ရိုနယျဒို
ပျေါတူဂီ ယူ-၁၇ အသငျး ဟာ နိုဝငျဘာ ၁၃ ကနေ ၁၉ ရကျနေ့ အတှငျးမှာ နောကျဆုံး အဆငျ့ ခွစေဈပှဲ အဖွဈ ယူကရိနျး ၊ ဂြျောဂြီယာ ၊ အယျဘေးနီးယား အသငျးတှေ နဲ့ ယှဉျပွိုငျ ကစား ရမှာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ ၂၀၂၀ U-17 အမြိုးသမီး ယူရိုပွိုငျပှဲကို တော့ လာမယျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ မလေ ၂၁ ရကျနေ့ ကနေ ဇှနျလ ၆ ရကျနေ့ အတှငျး ယှဉျပွိုငျ ကစား သှားမှာ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
မျိုးဆက်သစ် ဘောလုံးသမ လေးတွေကို စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို
ပေါ်တူဂီ တိုက်စစ်မှုးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ ပေါ်တူဂီ ဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျောက် အထွန်းလင်း အတောက်ပ ဆုံး ကစား သမား အဖြစ် ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။ ပေါ်တူဂီ ရဲ့ သက်တမ်း အလိုက် ဘောလုံး အသင်း အားလုံး မှာ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု က ကြီးမား ခဲ့ပြီး ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ကြိုးစားမှု ၊ ပြင်းပြ တဲ့ ခံယူချက် ၊ နိုင်လိုစိတ် တွေ ဟာ အမျိုးသား ရော အမျိုး သမီး အသင်း တွေကပါ စံပြ တစ်ဦး အဖြစ် မှတ်ယူ ထားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဒီ အထဲမှာတော့ ပေါ်တူဂီ U-17 အမျိုးသမီး အသင်း ဟာ သူတို့ရဲ့ စံပြ ကစား သမားကြီး ဆီက လက်ဆောင် တွေ နဲ့ ပေးစာ ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ ယူရို ၂၀၂၀ အမျိုး သမီး ပြိုင်ပွဲ ကို ၀င်ရောက် နိုင်ဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ ပေါ်တူဂီ U-17 သင်း ရဲ့ ရှေ့လာမယ့် ခြေစစ်ပွဲ တွေ မတိုင်ခင် မှာ ရိုနယ်ဒို ဟာ လက်ဆောင် တွေ နဲ့ အတူ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားတွေ ရရှိ စေမယ့် စာ တစ်စောင် ကို ရေးသား ပေးပို့ ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
U-17 အမျိုးသမီး အသင်း ဟာ အက်စ်တိုးနီးယား နိုင်ငံ က အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ အတွက် အရေး ပါတဲ့ နောက်ဆုံး အဆင့် ခြေစစ် ပွဲ ၃ ပွဲ ကို နိုဝင်ဘာထဲ မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရတော့ မှာ ဖြစ်ပြီး အခုလို သူတို့ရဲ့ စံပြ ကစား သမားကြီး ဆီက မထင်မှတ် ထားတဲ့ လက်ဆောင် တွေ ၊ ပေးစာ တွေ ဟာ စိတ်ဓါတ် ခွန်အား တွေ နဲ့ ပျော်ရွှင်မှု တွေကို ယူဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အမျိုးသမီး အသင်းသူ တွေ ဟာ ရိုနယ်ဒို ပေးထားတဲ့ ဘောကန်ဖိနပ်တွေ နဲ့ အတူ ပေးစာ ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြီး သူတို့ အသင်းရဲ့ Instagram အကောင့်မှာ ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ စာထဲ မှာ ရိုနယ်ဒို က အောင်မြင်မှု ကို လှမ်းယူ နိုင်ဖို့ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ် နဲ့ ခံယူချက် တွေ ကို မွေးမြူ ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို အဓိက ထား ရေးသား သွားခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် ။
“ဒီ Nike ဘောကန် ဖိနပ် တွေ ဟာ မင်းတို့လေးတွေ ရဲ့ အိပ်မက်တွေ ကို လှမ်းယူ ရာမှာ အကူ အညီ ဖြစ်စေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပြီး ပေးပို့ လိုက်ရ တာဖြစ် ပါတယ် ။ ငါ့ရဲ့ လူငယ် ဘ၀ တုန်းက အိပ်မက် က တကယ်ရိုးရှင်း ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ပြင်းပြ ထက်သန် တဲ့ အိပ်မက် တစ်ခု ပါ”
“အိပ်ယာ ထဲမှာ အိပ်ပျော် နေတုန်း တွေ့ရတဲ့ အိပ်မက် မျိုး မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး ။ အရမ်း ကို လိုချင် တောင့်တ ပြီး အိပ်ယာ ထဲ မှာ တောင် နိုးထ နေလောက်တဲ့ အထိ ပြင်းထန် တဲ့ စိတ်ဆန္ဒမျိုး ပါ ။ အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမား တစ်ယောက် ဖြစ်လာ ဖို့ ပါပဲ”
“ဒီ အိပ်မက် ဟာ ငါ့ကို အားကစား ခန်းထဲမှာ ၊ လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းထဲမှာ ၊ ဘောလုံး မြက်ခင်းပြင် တွေ ပေါ်ရောက်တဲ့ အထိ စွဲမြဲ စေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ အိပ်မက် နဲ့ ရှင်သန် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာလုပ်လုပ် ဒီ အိပ်မက် ကို လှမ်းကိုင် နိုင်မယ့် အရာတွေ ချည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်”
“ငါ့ရဲ့ အိပ်မက် ကို ငါကိုယ်တိုင် သတိပြု ရွေးချယ် နိုင်ခဲ့ သလိုပဲ မင်းတို့လေးတွေ ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက် ပန်းတိုင် ကို ကိုယ်တိုင် သတိပြု မိကြဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ် ။ ဒီ အိပ်မက် ဟာ မင်းတို့ ရှေ့ မှာ ရှိနေ တာပါ ။ တွန့်ဆုတ် မနေဘဲ ရယူနိုင်ဖို့ အတွက် အားထုတ်ကြပါစို့ ။ ငါတောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲ . . . မင်းတို့လေးတွေ လည်း လုပ်နိုင် ရမှာပါ”
“နောက်ဆုံး အဆင့် ခြေစစ်ပွဲ ကို ရောက်ရှိ သွားတဲ့ အတွက် အရမ်းပဲ ဂုဏ်ယူမိ ပါတယ် ။ ဆက်ပြီး ကြိုးစားပါ ။ နောက်ထပ် အောင်ပွဲ ဆီကို စိတ်အာရုံ အပြည့် စူးစိုက် ထားပါ ။ ကံကောင်း ပါစေ ။ ဖိနပ်တွေ အားလုံး အဆင်ပြေ ကြပါစေ” – ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို
ပေါ်တူဂီ ယူ-၁၇ အသင်း ဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ကနေ ၁၉ ရက်နေ့ အတွင်းမှာ နောက်ဆုံး အဆင့် ခြေစစ်ပွဲ အဖြစ် ယူကရိန်း ၊ ဂျော်ဂျီယာ ၊ အယ်ဘေးနီးယား အသင်းတွေ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၂၀၂၀ U-17 အမျိုးသမီး ယူရိုပြိုင်ပွဲကို တော့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်နေ့ ကနေ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ အတွင်း ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။